Niall Ferguson: TED Talk | isbeddel
← فن اغتيال الثورات
Niall Ferguson: TED Talk
TED Talks haddaad ku xidhnaan jirtay sii wad…haddii kale hadda ku xidhan. Waa haddii aad afkaarta iyo isriix-riixa dunida jeceshahay. TED waxay dorraad soo gelisay hadal uu leeyahay taariikhyahanka dhaqaalaha ee Ingiriiska ah, Niall Fergusan. Balaayadu documentary uu lahaa oo uu kaga sheekaynayey taariikhda lacagaha dunida ayaan hore u daawaday; dabadeed kaasaa ii hoggaamiyey in aan ogaado inuu yahay mid ka mid ah cadowga ugu halisan ee u xaydan shiiqinta xadaaraddii hore ee muslimiinta. Dhinaca kale, waa yaabe, waa odayga Ayaan Xirsi. Bishii hore ayay is guursadeen oo ilmo ayaaba la filayaa inay u dhasho dhammaadka sannadkan. Dee waxaabu u hibeeyey buuggiisa ‘Civilization: The West and the Rest’ . Sida uu ula dhacay Ayaan isaga oo ka sheekaynaya ayuu leeyahay: “…[Ayaan] understands better than anyone I know what Western Civilization really means—and what it still has to offer the world” Wikipedia.
Posted by Warfaa on Oktoobar 6, 2011 in Uncategorized